ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူများ အတွက် လှဖိုးခေါင် ကြားစခန်း တည်ဆောက်မှု အချ?? - Yangon Media Group
(လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန)
UEHRD ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ပြန်လည်လက်ခံ ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြေပြင်ကွင်းဆင်းလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ၂၃ ရက်ကစပြီး ပြန်လည်လက်ခံလို့ရမယ်၊ ဒီလိုလက်ခံဖို့အတွက် တောင်ပြိုလက်ဝဲနဲ့ ငါးခူရမှာ လက်ခံရေး စခန်းတွေလုပ်ထားတယ်၊ လက်ခံတဲ့နေရာမှာလည်း စိစစ်ပြီးမှ လက်ခံမှာပါ၊ စိစစ်လက်ခံပြီးတဲ့သူတွေကို လှဖိုးခေါင် စခန်းမှာ သူတို့နေရာတွေမှာ အိမ်တွေဆောက်လုပ်နေတဲ့အချိန် ခေတ္တ ခဏထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့သူတွေကသွားလို့ ရမယ်၊ မဆောက်လုပ်ခင်မှာ ဒီမှာခဏနေရမယ့် ကြားစခန်းပါ၊ ကျွန်တော်တို့ ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ၂၃ ရက်နေ့လောက်မှာ အလုံး ၃ဝ လောက်ပြီးသွားမယ်၊ ရှစ်ခန်းတွဲ အလုံး ၃ဝ ဖြစ်ပြီး တစ်ခန်းကို လူ ၄ဝ လောက်ဆံ့တယ်၊ အလုံး ၃ဝ ဆိုရင် လူ ၁၂ဝဝ ဆံ့တယ်၊ လကုန်ရက်ကျရင် အလုံး ၉ဝ နဲ့ ၁ဝဝ လောက် ပြီးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူ ၄ဝဝဝ နဲ့ ၅ဝဝဝ လက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်မှာ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် working groupနှစ်ခုတိုင်ပင်မယ်၊ ပြန်ရောက်လာမယ့် သူတွေက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက ပေးပို့တဲ့ပုံစံတွေ ဖြည့်ရမယ်၊ စိစစ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဒီမှာနေခဲ့တဲ့သူ ဟုတ်သလား၊ အကြမ်း ဖက်နဲ့ကင်းဝေးရမယ် စသဖြင့် အစစအရာရာ လုံခြုံစိတ်ချအောင် စိစစ်ပြီးမှ ဒီလူတွေတော့ ပြန်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းကို တစ်ဖက်နိုင်ငံကို ပို့ပြီးမှ ဒီဘက်ကို ပြန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အခုထိတော့ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကို လာဖို့အတွက် စာရင်းမရောက် သေးပါဘူး၊ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့က စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ အတိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။
ဦးညီပု( ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်)
ပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေရာ ၁၁ နေရာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ ဒီ ၁၁ နေရာက မောင်တော မြောက်ပိုင်းမှာပါ၊ တောင်ပိုင်းမှာလည်းပဲ လျာထားတာရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဆုံးအဖြတ်က မကျသေးဘူး၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဆဲပါ၊ ဒီလို ပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံး လုပ်နေပါတယ်၊ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးလည်း ကာနေပါတယ်။
(အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊UEHRD ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့)
UEHRD အဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်မှာ အဖွဲ့ကြီး ကိုးဖွဲ့ရှိပါတယ်၊ ကျွန်တော်က ဒီအဖွဲ့ကြီးကိုးဖွဲ့ရဲ့ အခြေခံအဆောက် အအုံတွေနဲ့ အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လုပ်မယ့် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လက်အောက်က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသင်းရုံးကို ရန်ကုန်မှာ အခြေစိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် စစ်တွေမှာလည်း ရုံးခွဲအနေနဲ့ ဝေသာလီကွင်းနေရာမှာ လုပ်ထားပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက စိစစ်လက်ခံမယ့်သူတွေအတွက် ပြန်လည်နေရာချထားဖို့ အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အရေးပေါ်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဒေသခံကုမ္ပဏီ ၃၉ ခုကို တင်ဒါစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ဦးကို အလုံး ၂ဝ၊ ၁၅ လုံး၊ ၁ဝ လုံး စသဖြင့် ခွဲပြီးတော့ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်၊ အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းတွေကို စိစစ် အတည်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာ အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လုပ်မယ့် မြေနေရာမှာ မြေနုတ်၊ ပရိတ်ရွတ်စသဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ၊ အဆောက်အအုံ အလုံး ၃ဝ လောက်မှာ လူဦးရေ ၁ဝဝဝ ကျော်လောက် နေထိုင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
နောက်ပြီး ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ နှောင့်နှေးနေမယ်ဆိုရင် အရန်အနေနဲ့ ယာယီတဲတွေကို အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ A Plan, B Plan ဆိုပြီး ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ လှဖိုးခေါင်စခန်းသည် ၁၂၄ ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး အဆောက်အအုံ ၆၂၅ လုံး ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကာ လူဦးရေ ၃ဝဝဝဝ ခန့်ထိ ယာယီနေထိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်တွင် အဆောက်အအုံ အလုံး ၄ဝ နှင့် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်တွင် အဆောက်အအုံ အလုံး ၁ဝဝ ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် လူဦးရေ ၈ဝ နေထိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိသူ အိမ်ထောင်စု ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်း၌ မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ မ??
သံရုံးအများစု နေပြည်တော်တွင် မြေကွက် ယူထားပြီးဖြစ်
ပေါင်ဒဏ်ရာကြောင့် ဗိုလ်လုပွဲကို ပါရီဆစ် လွဲချော်ရဖွယ်ရှိနေ